Shiinaha Wareegii labaad ee dufcaddii saddexaad ee kormeerka deegaanka oo la bilaabay! Sideed gobol oo shaqeyn doona! soosaarayaasha iyo alaabada | Fiilooyinka Tianbang
Xigasho: Wasaaradda Ecology iyo Deegaanka, Warbixinta Biyo La'aanta Shiinaha, Webka Dahabka Webka 2021-04-08
Iyadoo la raacayo Shuruucda Dhexe ee Shaqada Kormeerayaasha Ilaalinta Deegaanka iyo Deegaanka, wareega labaad ee dufcaddii seddexaad ee kormeerayaasha deegaanka iyo bey'adda ee dhexe ayaa la bilaabay iyadoo la ansixiyay Golaha Dhexe ee Xisbiga iyo Golaha Gobolka. Sideed kooxaha kormeerka dhexe ayaa leh ayaa loo dejiyay ilaalinta deegaanka iyo deegaanka ee Shanxi, Liaoning, Anhui, Jiangxi, Henan, Hunan, Guangxi iyo Yunnan gobolada iyo ismaamulada ilaa hal bil.
Sidee ayay tahay in shirkadaha wax xira ay shaqo wanaagsan u qabtaan?
Laga soo bilaabo Abriil 1 ilaa Abriil 4, Tangshan Bureau of Ecology and Environment ayaa soo warisay wadar ahaan 48 kiis oo ciqaab ciqaabeed deegaanka ah, oo wadar ah ganaax dhan 19.2 million yuan.Sidaas darteed, gobolka ilaalinta sharciga ilaalinta deegaanka ayaa ah mid adag, sidaa darteedna shirkad ahaan, sidee loola macaamilaa kormeerka deegaanka?
Qeyb ka mid ah sharraxaadda waxaa laga heli karaa ganaaxa Tangshan:
1. Soosaarida waxqabadka degdega ah ee labaad ee cimilada wasakhaysan ee culus lama fulin
2. Khayaanada xogta la socodka internetka
3. Aqoon isweydaarsiga ka daadan qiiqa habeysan
4. Ku guuldareysiga inaad sameysato liistada maareynta deegaanka oo hufan runtiina duub
5. Hawlgalka caadiga ah ee qalabka kormeerka ee internetka lama hubo
6. Qiiq toos ah
7. Xaaladda hadda jirta kuma xirna diiwaangelinta oggolaanshaha sii-deynta wasakhda ah
Isku soo wada duuboo, waa: hirgelinta maareynta deegaanka; Hirgelinta xakamaynta wasakheynta; Been ma leh.
Istaraatiijiyada la qabsiga
I. U hogaansanaanta deegaanka
* Hadday waafaqsan tahay siyaasadda warshadaha qaranka iyo xaaladaha helitaanka warshadaha maxalliga ah, iyo inay buuxiso shuruudaha ku habboon ee looga takhalusi karo awoodda wax soo saar ee gadaal;
* In la dalbado ogolaanshaha sii-deynta wasakhda ah ee sharciga waafaqsan oo loo sii daayo wasakhooyinka iyadoo la raacayo nuxurka rukhsadda;
* In habraaca aqbalaada ilaalinta deegaanka ay dhameystiran yihiin;
* Haddii mashruuca dhismaha ee shirkaddu uu fuliyay nidaamka EIA iyo "saddex isku mid ah" si waafaqsan sharciga;
* Haddii dukumiintiyada EIA iyo oggolaanshaha EIA la dhammaystiray;
* Haddii shuruudaha goobta shirkadu ay waafaqsan tahay waxyaabaha ku jira dukumiintiyada EIA: diirada la saaro hubinta in nooca mashruuca, cabirka wax soo saarka, goobta, tiknoolajiyada wax soo saarka la qaatay, xarumaha xakamaynta wasakhda, iwm ay waafaqsan yihiin EIA iyo ogolaanshaha dukumiintiyada;
* Haddii mashruucu bilaabo dhismaha 5 sano kadib ansixinta EIA, bal in dib loogu gudbiyo ogolaanshaha EIA.
Marka labaad, qaababka aqbalaadda ilaalinta deegaanka
Oggolaanshaha ilaalinta deegaanka marka la dhammeeyo mashaariicda dhismaha ayaa badiyaa ah in la hubiyo lana aqbalo hirgelinta ka hortagga wasakhda iyo xakamaynta xarumaha lagu soo bandhigay dukumintiyada iyo oggolaanshaha EIA Sidaa darteed, qaar ka mid ah mashaariicda dhismaha (sida mashaariicda dhismaha ee saameynta deegaanka), haddii EIA dukumiintiyada iyo ansixinta uma baahna dhismaha kahortaga wasakhda wasakhda adag iyo xarumaha xakamaynta (marka laga reebo tasiilaadka ku meel gaadhka ah inta lagu jiro muddada dhismaha), looma baahna in la fuliyo dhammaystirka ka hortagga wasakhda wasakhda adag iyo xarumaha xakamaynta ilaalinta deegaanka. cutubku waa inuu ku siiyaa sharraxaad u dhiganta warbixinta aqbalaadda ee kormeerka aqbalaadda madaxbannaan.
Oggolaanshaha xarumaha ilaalinta deegaanka ee wasakheynta biyaha iyo gaaska:
Xarumaha ilaalinta deegaanka ee wasakhda biyaha iyo hawada ee ku hoos jira mashaariicda dhismaha waa in la hubiyaa oo la aqbalaa unugyada dhismaha laftooda.
Oggolaanshaha ka hortagga wasakhda iyo xakamaynta meelaha:
Kahor intaan mashruuca dhismaha la hawl gelin ama la adeegsan, tas-hiilaadkeeda ka hortagga iyo xakamaynta wasakhda buuqa deegaanka waa in la hubiyaa oo la aqbalaa iyadoo la raacayo heerarka iyo habraacyada uu Gobolku faray; Haddii ay ku guuldareysato inay buuxiso shuruudaha Gobolka u qoray. , Mashruuca dhismaha lagama yaabo in la galiyo wax soo saar ama adeegsi.
Sida ku xusan Qodobka 48aad ee Sharciga Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha ee kahortagga iyo Xakamaynta Wasakhowga Deegaanka (wax laga beddelay 2018): Xagee, iyadoo lagu xadgudbayo qodobbada qodobka 14aad ee sharcigan, mashruuc dhisme la gelinayo wax soo saar ama Adeegsiga iyada oo aan la dhammaystirin tas-hiilaadka ka-hortagga iyo xakamaynta wasakhda buuqa deegaanka ama aan la kulmin shuruudaha uu Gobolku soo qoray, waaxda bey'adeed ee aqoonta u leh ama ka sareysa heer degmo ayaa ku amri doonta inay ku sameyso sixitaan muddo xaddidan gudahood ah, kuna soo rogto ganaax ku saabsan cutubka ama shakhsiga; Haddii wasakheynta weyn ee deegaanka ama waxyeelada deegaanka ay sababtay, waxaa lagu amrayaa inay joojiso wax soo saarkeeda ama isticmaalkeeda, ama, marka ay oggolaato dowladda dadka oo leh awood oggolaansho ah, in la xiro.
Oggolaanshaha ka hortagga wasakhda wasakhda adag iyo xarumaha xakamaynta:
Bishii Abriil 29, 2020, sharciga Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha ee ka hortagga iyo xakamaynta wasakhda deegaanka ee qashinka adag dib u eegis labaad (waa in la dhaqan galiyaa laga bilaabo Sebtember 1, 2020), mashaariicda dhismaha waxay u baahan yihiin inay samaystaan ​​koox adag oo adag tas-hiilaadka ka hortagga wasakhda wasakhda, ka dib marka la dhammaystiro dhammaan baahiyaha si madax-bannaan qaybta dhismaha si loo fuliyo aqbalaadda ilaalinta deegaanka, mar dambe looma baahna in laga codsado waaxda maamulka ee aqbalaadda ilaalinta deegaanka.
Is-kormeerka, hagaajinta iyo xarumaha daaweynta ee la xiriira gaaska qiiqa
Hubi xaaladda hawlgalka, hawlgalka taariikheed, awoodda maaraynta iyo awoodda xarunta daaweynta gaaska qiiqa.
1, kormeerka gaaska qiiqa
* Hubi in habka daaweynta gaaska qashinka dabiiciga ah ee joogtada ahi macquul yahay.
* Hubi nidaamyada hanti dhowrka iyo tilmaamayaasha waxqabadka qalabka kuleylka kuleylka, hubi heerka socodsiinta qalabka gubida, hubi xakameynta baaruud dioxide, hubi xakameynta oksaydhka oksaydhka.
* Hubi habka gaaska qashinka, boodhka iyo urta ilaha;
* Hubi in gaaska qiiqa, boodhka iyo dheecaanka urku ay buuxinayaan shuruudaha heerarka dheecaanka wasakhaysan ee khuseeya;
* Hubi soo kabashada iyo ka faa'iideysiga gaaska ololi kara;
* Hubi tallaabooyinka ilaalinta deegaanka gaadiidka, rarka, dejinta iyo keydinta gaasaska sunta ah iyo kuwa waxyeellada leh iyo boodhka.
2. Kahortaga iyo xakamaynta wasakhda hawada
* Ka saarida Boorka, sifaynta, denitration, nidaamka nadiifinta wasakhda kale ee gaaska;
* Qiiqa gaaska ka baxa;
* Hubi in wasakhda wasakhdu ay dhuujisyo cusub ka dhisteen meelaha ay ka mamnuuc tahay daaqa cusub;
* Hubi in dhererka mashiinka qiiqa uu buuxiyo shuruudaha heerarka dheecaanka wasakhda qaranka ama deegaanka;
* Hubi inay jiraan godad sambal ah iyo dhufto gaasaska qiiqa ah oo laga helayo dhulalka la socodka
* Hubi in dekedda qiiqa loo dhigay si waafaqsan shuruudaha (dhererka, dekedda sampling, saxanka calaamadeynta, iwm.), Iyo in gaaska qiiqa ee loo baahan yahay la rakibay oo loo isticmaalay tas-hiilaadka kormeerka ee internetka sida ay sheegtay waaxda ilaalinta deegaanka.
3. Meelaha laga sii daayo hawada ee aan abaabulnayn
* Meelaha qiiqa laga sii daayo ee aan habeysnayn ee sunta iyo sunta waxyeellada leh, boodhka iyo qiiqa, haddii xaaladuhu saamaxaan in la sii daayo habeysan, hubi in qaybta ka-bixidda wasakhda ah ay fulisay sixitaan oo ay hirgelisay qiiq habeysan;
* Hubi boorka ku jira ardaaga dhuxusha, ardaaga maaddada, badeecada iyo siigada habka wax soo saar ee dhismaha, haddii talaabooyinka looga hortagayo wasakhda wasakhda la qaatay ama qalabkii ka hortagga boodhka loo dhigay sidii loo baahnaa;
* Ku samee kormeer xuduudaha shirkadda si loo hubiyo in qiiqa aan habeysnayn uu sii daayo heerarka deegaanka ee khuseeya.
4. Uruurinta gaaska qashinka iyo gaadiidka
* Uruurinta gaaska qashinka waa inay raacdaa mabda'a ah "ururi dhammaan inta la qaadan karo oo ku soo ururi tayada." Nidaamka ururinta gaaska qiiqa waa in si guud loo qaabeeyaa iyadoo la raacayo astaamaha gaaska, heerka socodka iyo arrimo kale si loo hubiyo saameynta ururinta gaaska.
* Xiritaanka, go'doominta iyo tallaabooyinka hawlgalka cadaadiska xun waa in loo qaadaa qalabka soo saara boodhka ka baxsada ama gaasaska waxyeellada leh.
* Gaaska qashinka waa in lagu uruuriyaa nidaamka gaas aruurinta ee qalabka wax soo saarka laftiisa sida ugu macquulsan. Marka gaaska ka baxsanaya ay soo ururiso gaaska aruurinaya (boodhka), waa in lagu hareeraa ama u dhow yahay isha wasakhda inta ay suurtagal tahay si loo yareeyo baaxadda nuugista iyo fududeynta qabashada iyo xakamaynta sunta.
* Gaaska qashinka ee ka dhasha nidaamka ururinta biyaha qashinka iyo unugyada xarunta daaweynta (haanta asalka ah, taangiga habeeya, taangiga anaerobic, haanta hawo qaadista, taangiga dhoobada, iwm.) Waa in la soo ururiyaa hawo la'aan, waana in la qaadaa talaabooyin wax ku ool ah oo lagu daaweynayo laguna sii daayo.
* Qashinka adag (qashinka halista ah) meelaha keydinta leh walxaha dabiiciga ee kacsan ama ur cad waa in la xiraa, gaaska qashinka ahna waa in la soo ururiyaa lana daaweeyaa lana siidayaa.
* Gaaska wasakhda ah ee laga soo ururiyey gaaska aruurinta (boodhka) waa in loo qaadaa qalabka wax lagu nadiifiyo iyada oo loo marayo dhuumaha. Qaab dhismeedka dhuumaha waa in lagu daraa tiknoolajiyada wax soo saarka, laguna dadaalo in ay ahaato mid fudud, kooban, dhuumaha gaagaaban, meel yar.
5. Daaweynta gaaska qashinka
* Shirkadaha waxsoosaarka waa inay doortaan dariiqa habka daaweynta gaaska qiiqa ee qaangaarka ah ka dib falanqeyn ballaaran oo ku saabsan xaddiga wax soo saarka ee gaaska qiiqa, halabuurka iyo nooca wasakhda, heerkulka iyo cadaadiska, iwm.
* Gaaska qashinka dabiiciga ah ee uruursiga, tiknoolajiyada soo kabashada (cryogenic) iyo tikniyoolajiyadda soo kabashada xayeysiinta cadaadiska waa in loo qaataa dib-u-warshadaynta iyo adeegsiga iskudhafyada dabiiciga ah ee gaaska qashinka, ka dibna tiknoolajiyada kale ee daaweynta waa in loo adeegsadaa in lagu gaaro heerarka qiiqa.
* Gaaska qashinka dabiiciga ah ee udub dhexaad u ah, tikniyoolajiyadda xayeysiinta waa in la qaataa si looga soo kabto dareeraha dabiiciga ah ama tiknoolajiyada qiijinta kuleylka ka dib nadiifinta, heerarka soo deynta
* Gaaska qashinka dabiiciga ah ee urursan, marka uu jiro qiime soo kabasho, tikniyoolajiyadda xayeysiinta waa in la adeegsadaa; Marka aysan jirin qiime soo kabasho, tiknoolajiyada gubashada fiirsiga xayeysiiska, teknoolojiyada kuleylka ee dib-u-cusbooneysiinta, tikniyoolajiyadda isdaahirinta bayoolajiga ama tikniyoolajiyadda plasma.
* Gaaska urta waxaa lagu nadiifin karaa tiknoolajiyada nadiifinta microbial, teknoolajiyada plasma heerkulka hooseeya, xayeysiinta ama tikniyoolajiyadda nuugista, tikniyoolajiyadda gubida kuleylka, iwm. Daahirinta kadib, waa la sii deyn karaa ilaa heerka, mana saameyn doonto bartilmaameedyada ilaalinta xasaasiga ah ee ku xeeran. .
* Mabda 'ahaan, shirkadaha kiimikada ee leh wax soo saar isdaba joog ah waa inay dib u warshadeeyaan ama gubaan gaaska qashinka dabiiciga ah ee guban kara, halka shirkadaha kiimikada leh soosaarid aan kala go' lahayn ay qaataan qashinka, xayeysiinta ama habka isku dhafan ee daaweynta.
* Gaaska wasakhda ah waa in lagu daaweeyaa isku darka boodhka ka saarida, ka qaadista boodhka elektaroolka ama ka qaadista boodhka sida udub dhexaadka u ah.Kalaasyada warshadaha iyo foornada warshadaha waxay mudnaanta siinayaan tamar nadiif ah iyo hanaan nadiifin hufan, waxayna buuxinayaan shuruudaha dhimista qiiqa ee sunta waaweyn. .
* Hagaajinta heerka otomaatiga daaweynta gaaska qashinka. Xarumaha daaweynta buufinta waxay isticmaali karaan aaladda dareeraha tooska ah ee dareeraha, qalabka xakamaynta tooska ah ee pH iyo aaladda xakamaynta otomaatiga ah ee ORP, taangiga qiyaasta waxaa lagu qalabeeyaa aaladda qalabka digniinta heerka dareeraha ah, qaabka qiyaasta daawada waa inuu noqdaa qiyaasta otomaatiga ah.
* Dhererka silsiladda qiiqa waa in loo dejiyaa iyadoo loo eegayo shuruudaha qeexida. Dhererka dhululubada ka-yar ma aha wax ka yar 15 mitir, hydrogen cyanide, chlorine, phosgene dusha sare ee silsiladda qiiqa ma ahan wax ka yar 25 mitir. daaweynta terminal waa in la siiyaa dekedda sampling iyo tas-hiilaadyo si sahal yar loo soo qaado.Si adag loo xakameeyo tirada dhululubada qiiqa ee shirkadda, silsilado gaas oo dhammaystiran ah waa in la mideeyaa.
IV. Xarumaha is-baadhista, toosinta iyo daaweynta biyaha wasakhda ah
1, kormeerka xarumaha bullaacadaha
* Xaaladda howlgalka, xaaladda qalliinka taariikhiga ah, awoodda daaweynta iyo xaddiga biyaha la daweeyay, maareynta tayada ee biyaha wasakhda ah, saameynta daaweynta, daaweynta qashinka iyo ka takhalusidda xarumaha daaweynta bullaacadaha.
* Haddii buuga socodsiinta howlaha wasakhda biyaha qashinka (waqtiga furitaanka iyo xiritaanka xarunta daaweynta bulaacada, biyaha qashinka soo galaya iyo kuwa ka baxa, tayada biyaha, qiyaasta qiyaasta iyo dayactirka).
* Hubi in xarumaha qashin-qubka degdegga ah ee shirkadaha wasakhda bulaacaduhu ay dhammaystiran yihiin, iyo in ay damaanad qaadi karaan ka-hortagga, kaydinta iyo daaweynta biyaha wasakhda ah ee ka dhasha haddii ay dhacaan shilalka wasakheynta deegaanka.
2, baaritaanka qashinka bullaacadaha
* Hubi in meesha ay ku yaalliin bullaacadaha bullaacadaha ay waafaqsan tahay qawaaniinta, hubi in tirada meelaha wasakhda wasakhda ee wasakhda wasakhaysan ay waafaqsan tahay xeerarka khuseeya, hubi in goobaha muunad qaadista ee kormeerka loo dejiyay si waafaqsan heerarka soo saarista wasakhda wasakhaysan ee khuseeya. qaybta cabbiraadda heerka ayaa loo dejiyey si loo fududeeyo cabbirka socodka iyo xawaaraha.
* Haddii marinka bullaacadaha ee ugu weyn uu ku qalabeysan yahay calaamadaha ilaalinta deegaanka.Soo diyaari qalabka la socodka iyo la socodka qadka sida loogu baahan yahay.
3, barakac, kormeerka tayada biyaha
* Hubi diiwaanada hawlgalka haddii ay jiraan mitirro qulqulaya iyo qalab lagula socdo il wasakhda;
* Hubi tayada dheecaanka la siidaynayo si loo buuxiyo shuruudaha heerarka soo saarista wasakhda qaranka ama deegaanka.
* Hubi tusaalooyinka iyo qeexida qalabka kormeerka, mitirrada iyo qalabka, iyo sidoo kale hubintooda iyo halbeeggooda.
* Hubi hababka gorfaynta kormeerka iyo diiwaanada la socodka tayada biyaha ee la isticmaalay. Kormeerka goobta ama muunad qaadista ayaa la samayn karaa haddii loo baahdo.
* Hubi biyaha roobaadka iyo leexinta bullaacadaha, oo hubi in qaybta wasakhda wasakhaysan ay fuliso biyaha roobka iyo weecsiga bulaacada.
4, hirgelinta roobka iyo leexinta wasakhda
* Deji taangiga bilowga ah ee aruurinta biyaha roobka iyadoo loo eegayo qeexitaannada, si loo buuxiyo tirada mugga ee roobka hore;
* Taangiyada ururinta biyaha wasakhda ah ayaa lagu diyaariyey aqoon isweydaarsiyo ay leeyihiin biyo wasakh ah, bulaacada la ururiyeyna waxaa lagu shubayaa xarumaha ku habboon daaweynta biyaha wasakhda ah iyadoo la marinayo tuubooyin xiran;
* Biyaha qaboojinta waxaa dib loogu warshadeeyaa tuubooyin xiran;
* Gullies-ka furan waxaa loo isticmaalaa aruurinta biyaha roobka. Dhamaan boholaha iyo balliyada waxaa lagu dhisay shubid shub ah, oo ay kujiraan talaabooyin kahortaga bulaacada ama qashinka.
5. Ku daadinta biyaha wasakhda ah ee soosaara iyo bilowga biyaha roobka
* Shirkadaha iskood u daaweeya una soo daaya biyaha wasakhda ah kaligood waa inay dhisaan tas-hiilaad lagu daweeyo biyaha qashinka oo la jaan qaadaya awooda wax soo saarkooda iyo noocyada wasakhda ah. Xarumaha daaweynta biyaha qashinka waa inay u shaqeeyaan si caadi ah oo waxay awood u yeelan karaan inay si joogto ah u soo baxaan illaa heerka;
* Shirkadaha la wareega biyaha qashinka waa inay dhisaan xarumo lagu daaweynayo oo ku habboon awooda wax soo saar iyo noocyada wasakhda ah. Xarumaha ku-meel-gaadhka ahi waxay u shaqeeyaan si caadi ah waxayna buuxin karaan heerka ay kula wareegi karaan si deggan;
* Shirkadaha loo igmaday daaweynta biyaha wasakhda ah waa inay heshiis la galaan cutubyo u qalma, dhammaystirna oggolaansho iyo nidaamyada wareejinta, oo ay samaystaan ​​koonto lagu shubo oo lagu aaminay.
* Shirkadaha u qalma inay la wareegaan bulaacada waa inay la wareegaan dhirta lagu daweeyo bullaacadaha si loogu daweeyo bullaacadaha gudaha
6. Dejinta outlet
* Mabda 'ahaan, shirkad kastaa waxaa loo oggol yahay oo keliya inay samayso hal god oo bullaacad ah iyo hal ka soo baxa biyaha roobka, iyo inay samaysato sambal lagu kormeerayo Ceelasha iyo calaamadaha.
* Meelaha laga sii daayo biyaha wasakhda ah waa inay buuxiyaan shuruudaha hagaajinta caadiga ah, si markaa loo gaaro "mid iska cad, laba macquul ah, seddex ku habboon", taas oo ah, astaamaha ilaalinta deegaanka ayaa iska cad, dejinta bulaacada ayaa macquul ah, jihada bullaacadaha wasakhda waa macquul, fudud ururinta shaybaarka, fududahay in la kormeero lana cabiro, fududahay kaqeybgalka dadweynaha iyo kormeerka iyo maaraynta;
* Unugyada buuxiya shuruudaha Qodobka 4-aad ee Tallaabooyinka Ku-Meelgaarka ah ee Kormeerka iyo Maareynta Nidaamka Kormeerka Tooska ah ee Ilaha Wasakheynta Warshadaha ee Gobolka Jiangsu waa inay ku rakibaan qalab kormeer ah otomaatig ah si ay u soo saaraan wasakhda waaweyn sida loo baahan yahay, iyo inay la xiriiraan xarunta kormeerka ee Xafiiska Ilaalinta Deegaanka.
* Cagajugleyaasha caadiga ah ee furan waa in loo adeegsadaa dheecaanka biyaha roobka, waana in lagu rakibo furayaasha xaaladaha degdegga ah.
1. Haysashada afar shey oo u hoggaansamida qashinka halista ah
Qorshaha maareynta qashinka halista ah: shirkadu waxay soo uruurineysaa qorshaha maaraynta qashinka halista ah iyadoo la raacayo qorshaha wax soo saarka iyo astaamaha wax soo saarka iyo qashinka, hagida maareynta qashinka halista ah sanadka oo dhan una gudbiso xafiiska ilaalinta deegaanka ee deegaanka si loo xareeyo.
Qorshaha wareejinta qashinka halista ah: u diyaari qorshaha wareejinta qashinka halista ah iyada oo la raacayo shuruudaha waaxda maaraynta deegaanka.
Nuqul wareejinta qashinka halista ah: ku buuxi nuqulka si waafaqsan shuruudaha iyo tilmaamaha.
Buugga maareynta qashinka halista ah: run ahaantii buuxi dhammaan macluumaadka geeddi-socodka ee jiilka, ururinta, kaydinta, wareejinta iyo ka-qaadista qashinka halista ah iyadoo la raacayo shuruudaha sharciyada iyo xeerarka iyo waaxaha maareynta maxalliga ah iyo sidoo kale shuruudaha maaraynta qashinka halista ah ee shirkadaha.
2. In la hagaajiyo nidaamka maaraynta deegaanka qashinka halista ah
* In la dejiyo nidaam masuuliyadeedu tahay ilaalinta deegaanka. Shirkaduhu waa inay dejiyaan nidaam mas'uul ka ah ilaalinta deegaanka si loo caddeeyo waajibaadka saaran qofka mas'uulka ka ah qeybta iyo shaqaalaha ay khuseyso.
* U hogaansanaanta nidaamka warbixinta iyo diiwaangelinta Shirkadaha waa in, iyadoo la raacayo qodobbada ku habboon ee Gobolka, ay dejiyaan qorshayaal lagu maareeyo qashinka halista ah.
* Samee talaabooyin ka hortag ah iyo qorshooyin deg deg ah oo shilalka ah Shirkadu waa inay dejiso talaabooyin ka hortag ah iyo qorshooyinka deg degga ah ee shilalka oo ay u gudbiso waaxda maamulka ee awooda u leh ilaalinta deegaanka ee dawlada deegaanka ee degmada ama ka saraysa heerka gobolka ee diiwaanka.
* Abaabul tababar khaas ah Shirkaddu waa inay tababartaa shaqaalaheeda si kor loogu qaado wacyiga dhammaan shaqaalaha ee maaraynta qashinka halista ah.
3. Si adag u hoggaansanaanta shuruudaha ururinta iyo kaydinta
* Waa in la helaa xarumo khaas ah oo lagu keydiyo qashinka iyo konteenarrada Shirkadu waa inay dhistaa tas-hiilaad khaas ah oo khaas ah, ama waxay u isticmaali kartaa dhismayaasha asalka ah dhisida tas-hiilaadka noocaas ah.Xulista goobta iyo qaabeynta xarunta waa inay u hogaansanto "Heerarka Xakamaynta Wasakhda Marka laga reebo qashinka halista ah ee halista ah ee aan lahayn hawo ama qiiqa heer kulka iyo cadaadiska, shirkadaha waa inay qashinka halista ah galiyaan weelal buuxiya heerarka.
* Qaababka uruurinta iyo keydinta iyo waqtiga waa inay buuxiyaan shuruudaha. Shirkadu waa inay aruurisaa oo keydisaa qashinka halista ah iyadoo la raacayo astaamaha qashinka halista ah, waana inay sidoo kale qaadaan talaabooyin looga hortagayo wasakheynta deegaanka. Waa mamnuuc in la aruuriyo lana keydiyo qashinka halista ah ee isku dhafan oo aan la jaan qaadi karin. guryaha aan si ammaan ah loo dawayn, oo ay mamnuuc tahay in la keydiyo qashinka halista ah ee lagu dhex daro qashinka aan halista lahayn. Khaanadda, baakadka iyo goobta kaydintu waa inay dhigaan calaamadda aqoonsiga qashinka halista ah iyada oo la raacayo heerka qaran ee ku habboon iyo "Calaamadaha Hirgelinta Xeerarka Ilaalinta Deegaanka> (Tijaabo) ”, oo ay kujirto sumadda dhajinta ama calaamadda digniinta, iwm. Muddada keydinta qashinka halista ah waa inaysan ka badnaan hal sano, iyo kordhin kasta oo muddada keydinta ah waa in ay oggolaato waaxda ilaalinta deegaanka.
4. Si adag u raac shuruudaha gaadiidka
Shirkadaha adeegsada gawaarida qaaska ah iyo shaqaalaha takhasuska gaarka ah leh waxay u hogaansamayaan qodobada Gobolka ee ku saabsan maareynta daabulida badeecadaha halista ah, waana mamnuuc in lagu qaado qashinka halista ah iyo rakaabka isla gaadiidkan. iyo shaqaalaha ay khuseyso waa inay u hogaansamaan qodobbada ku habboon ee Shuruucda Maamulka Gaadiidka Alaabada Khatarta ah ee Waddada iyo Xeerarka ku saabsan Maareynta Amniga ee Kiimikooyinka Khatarta ah. Ruqsadda Howlgalka Gaadiidka Alaabada Khatarta ah ayaa loo heli doonaa hawlgalka waddada halista ah badeecadaha, iyo Shatiga Gaadiidka Alaabada Khatarta ah ee Wadista waa in loo helaa hawlgalin la’aanta gaadiidka alaabada halista ah.
Tallaabooyinka Kahortagga, Xakamaynta iyo Nabadgalyada ee Shirkadaha qaada qashinka halista ah waa inay qaadaan tallaabooyin looga hortagayo wasakheynta deegaanka iyo xoojinta maaraynta iyo dayactirka xarumaha, qalabka iyo goobaha loo isticmaalo daabulista qashinka halista ah. ku qalabaysan calaamado aqoonsi oo loogu talagalay qashinka halista ah. Gaadiidka isku dhafka ah ee qashinka halista ah ee aan is-waafaqsanayn ee aan si ammaan ah loo qaadin waa mamnuuc.
Barroosinka Hoolka Birta ee Cadaadiska ah, Aargoosyada aasaaska aasaasiga ah, Dhagaha Dhagaha, Hex Socket Bolt, Hex Socket Head Bolt, Bolt isku xidhka Nut,